Agatha အလွှာထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ – အဆိုပါ Tailoress
နေအိမ် / အမြိုးသမီးမြား / အဝတ်အစား / Agatha အလွှာထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Dress PDF ကိုအပ်ချုပ်စံနမူနာ
အရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်4/6/ 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
Copyshop အရွယ်အစား: 134cm x 70cm
A4 စာမကျြနှာ: 20
Lay RIGHT SIDES together with the BACK SKIRT. တွယ်အပ်, stitch and finish the side seam allowances. Finish using zig-zag stitch or an overlocking stitch.
တွယ်အပ်, stitch and finish the shoulder seam allowances.
ချုပ်, trim and finish the seam allowance.
တွယ်အပ်, stitch and finish from the SLEEVE cuff to the waistline.
တွယ်အပ်, stitch and finish the waistline seam allowance.
ချုပ်, trim and finish to complete. You may like to top-stitch using zig-zag stitch to secure the seam allowance.